UBaxter uchaza ngokungabizwa kukaSerero kuBafana | News24
Cape Town – Umqeqeshi weBafana Bafana, uStuart Baxter, ukholwa ukuthi umgadli we-Ajax Amsterdam, uThulani Serero, kumele athole ikilabhu entsha uma efuna ukubizwa eqenjini lesizwe.
Lo mdlali oneminyaka engu-27 ubudala wayengaconsi phansi ngesikhathi sobengumqeqeshi ngaphambilini, uShakes Mashaba, phezu kokuthi wayekuthola kunzima ukuba seqenjini lokuqala le-Amsterdam.
Kodwa-ke noma kunjalo, uBaxter uthi ukubiza lo mgadli owayedlalela i-Ajax Cape Town bekungeke kube nobulungiswa esikwatini sesisonke.
“Angizange ngimqoke uThulani Serero,” uBaxter usho kanje ngemuva kokumemezela isikwati sabadlali abangu-25.
“Sengike ngaba nokuxhumana naye ngase ngamazisa ukuthi angicabangi ukuthi kunobulungiswa kuyena noma esikwayini sesisonke, uma ngabe usabe nemizuzu engu-800 yebhola ezingeni eliphezulu esikhathini esingunyaka esedlule.
“Angeke ngimuqoke kulo mdlalo kodwa ngimutshelile ukuthi ngizonitshela nina (abezindaba) ukuthi ngicabanga ukuthi ungelinye lamathalente ethu amakhulu.
“Uma esethole ikheli elisha (esedlalela ikilabhu entsha) ngizoqhubeka nokusebenza naye.”
INingizimu Afrika kulindeleke ukuthi itholane phezulu neNigeria ngoMgqibelo, ngomhlaka-10 kuJuni emdlalweni wokuvula wokuhlungela umqhudelwano we-2019 Africa Cup of Nations (AFCON).
IBafana Bafana izothatha indiza elibhekise eNigeria ngomhlaka-7 kuJuni ngaphambi kwalo mdlalo ozodlalelwa eGodswill Akpabio International Stadium, e-Uyo State, khona kuleliya lizwe.